ဗင်းဆင့်နှင့်အတူ လွှင့်ခဲ့တဲ့ ပင်လယ် (၃) ~ ရင်နင့်အောင်ရဲ့ ဘလော့ခ်
11:39 AM ရင်နင်အောင် No comments
ဟား …ဟား ….ဟား …. လို့။
ကဲ။ နိုးထလော့။ ငါတို့ရဲ့ အိပ်မက်ရင်ခွင်သည် လက်တွေ့ညဦးယံကို ကျော်လွန်စေသတည်း။
ညက ကြယ်တွေငိုတော့ မိုးတွေရွာတယ်။ ငါက မိုးရေချိုးရင်း လူ့ဘ၀ကို စလုံးရေပြန်စဖို့ ပြင်နေတုန်း။ ဒုက္ခဆိုတဲ့တရားက နောက်မကျပေမယ့် ညဉ့်နက်သန်းခေါင်မှာ လင်းဝေစွာ ထိုးသွင်းလိုက်လေပြီ။ အော် …. လွမ်းတယ်ကွဲ့ သမီးရဲ့။ ဝေးကွာမှုကို မနီးစပ်ပေးနိုင်တဲ့ ခင်ဗျားက အနည်းဆုံး သက်ပြင်းလေးတော့ချ၊ ပြီးတော့ စာနာဟန်လေးတော့ လုပ်ပေါ့ဗျာ။ ခုတော့ နှလုံးသားက တောင်းဆိုသမျှ ဘာကိုမှ မငြင်းဆန်ရဲသေးတဲ့ကောင်ဟာ ခုချိန်ထိ ဘယ်ညာ မခွဲတတ်သေးဘူး။
နောက်ကြောကို ဓါးနဲ့ထိုးမလို့လား။ ရင်ဘက်ကို ဓါးနဲ့ထိုးချင်လား။ ခေါင်းကိုပဲ အုတ်ခဲနဲ့ ရိုက်မလား။ ငါဟာ ခြေချော်လက်ချော် ဒီစာကို မရေးခဲ့လေဘူး။ ငါထုဆစ်ခဲ့တဲ့ အနုပညာမှာ ပါရမီတွေ မပါဘူး။ မှတ်ကျောက်တွေ မပါဘူး။ မိုင်တိုင်တွေ မလိုဘူး။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာဟာ တယောမထိုးပါပဲ လွမ်းဖွဲ့ကို ဖော်ကြူးမလို့လား။ ဟာ…. ငါလွမ်းပါတယ်ကွဲ့။ ငါဟာ လွမ်းတတ်တဲ့ သတ္တ၀ါ။ ငါဟာ နှလုံးသားနဲ့ အသက်ရှုတဲ့ကောင်။ ငါဟာ ယုံကြည့်ချက်နဲ့ ဖိနပ်စီးတဲ့ကောင်။ တစ်ခုပဲ။ နေကြာတွေကို မသရော်ကြေး။
မတည်ငြိမ်နိုင်သေးဘူး။ ခုထိ။ မုန်တိုင်းလည်း မရှိတော့ဘူး၊ ဒီလှိုင်းလည်း မရှိတော့ဘူး ဆိုပေမယ့် ငါဟာ မတည်ငြိမ်နိုင်သေးဘူး။
လိပ်ပြာတွေသာ ခြေရာထင်နိုင်ရင် ပန်းတွေဟာ လှနိုင်ပါဦးမလားရယ်လို့ ငါက ……… မတွေးတော့ဘူး။
ဟုတ်တယ်။ တဆိတ်လောက် ဘယ်သူ့ကိုမှ မပြောပါနဲ့။ မုန်တိုင်းကိုမှ ငါဟာ ခလုတ်တိုက်မိခဲ့လေပြီ။ ငါ့မှာ ခန္ဓာကိုယ် မရှိတော့လေဘူး။ ဒါပေမယ့် ငါဟာ လွယ်လွယ်ဖြေလို့ရတဲ့ စာမေးပွဲလည်း မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ ငါဟာ လူတွေအတွက် ဂငယ်ကွေ့လည်း မဟုတ်ခဲ့သလို လူတွေနားမလည်တဲ့ ခက်ဆစ်တစ်ပုဒ်လည်း မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။
အဆိပ်တွေကို သောက်ခဲ့ပြီးမှ နောင်တမရပါနဲ့ ကိုယ့်လူ။
ငါဟာ အာလူးစားရင်းနဲ့ မေတ္တာတရားကို ခံစားတတ်ခဲ့လေပြီ။
လူကူးမျဉ်းကြားဆွဲနေတဲ့ ငါ့ကိုမှ လောကဟာ ကားနဲ့ ၀င်တိုက်ပစ် ..ရ ..သ …လား ….။
ကမ္ဘာကို ပိုင်သမျှ အကုန်မပေးနိုင်းသေးခင်။
ပန်းတွေ ဖူးပွင့်ဝေနေတဲ့ ဆောင်းဦးညတစ်ညရဲ့ ရင်ခုန်သံမှာ ငါ ကြေကွဲတယ်ကွဲ့ ညီမလေးရယ်။
ယိမ်းလုံးမှိုင်းဝေဆိုင်းနေတဲ့ ဆိုက်ပရက်စ်ညတစ်ညကို ငါက မလွမ်းပါဘူး။ ငါဟာ သာမန်လူတစ်ယောက်။ ငါဟာ သက်ပြင်းဝေေ၀နဲ့ နှလုံးသားကစေစားရာ လက်မြောက်နေရသေးတဲ့ လူတစ်ယောက်။ ငါဟာ ဘာကိုမှ မစတေးနိုင်သေးတဲ့လူ။ အော် … တောင်တန်းတွေ ကွေ့ကောက်ကုန်ကြပြီလား။ မိုးတိမ်တွေ ဆွေးမြေ့နေကြပြီလား။ ချစ်ခြင်းကြယ်ဟာ နှလုံးသားကို ချန်ထားခဲ့ပြီး သူတစ်ကိုယ်တည်း ခရီးဆက်ခဲ့လေပြီလား။ အမှန်တရားဟာ လစာနည်းတဲ့ ၀န်ထမ်းတစ်ယောက်လို စိတ်ဓါတ်ကျကာ သူ့ကိုယ်သူ အဆုံးစီရင်လိုက်တော့မှာလား။ ဟယ်။။။။။။။ ငါ့ကို တစ်ဆိတ်လောက် သည်းခံပါ။ ငါ ….။ ငါ။။။။။ ငါ…… ငို .. ပါ.. ရ ..စေ .. လား …။
အဖြူထည်သက်သက်ပဲ ငါဝတ်ခဲ့ပေမယ့် ငါဟာ ဆေးကြောလို့မရတော့တဲ့ အစွန်းအထင်းကောင်ပါ။ ဝေဒနာကို ဆေးဆိုးပန်းရိုက်မလုပ်လေနဲ့။ ငါဟာ အပေါစား ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်လည်း မဟုတ်ခဲ့လေဘူး။ အော် ….။ ကြယ်တွေ စုံကြပြီလား .. ။ ကြယ်တွေစုံကြပြီလား။ ငါဟာ လွမ်းနေသေးတဲ့ကောင်။ တစ်ကောင်တည်း။ ဒါပေမယ့် ကြွက်တစ်ကောင်ရယ်လို့ ချမပြရဲသေးတဲ့ကောင်။ ကော်ဖီဆိုင်တစ်ဆိုင်ရဲ့ ကြယ်တွေထွန်းလင်းချိန်တန်ပြီလား။ ငါပြန်တော့မယ်ကွယ် သူငယ်ချင်းရဲ့။ ရှင်းပြလို့ မရတဲ့ မသိကိန်းတွေနဲ့တော့ ငါ့ကို ခေါင်းမစားလေနဲ့။ ဘ၀မှာ အိမ်ပြန်ချိန်ဆိုတာ ရှိရသေးတယ်ကွဲ့။ ကဲ။ ဗင်းဆင့်နဲ့ အတူ ငါဟာ ….။